Ny BQ dia manavao ny laharany U mankany Android 7.1.1. Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra sy ny fomba hiroso | Androidsis
Tsy misy isalasalana fa ny BQ angamba no marika teknolojia espaniola malaza indrindra eran-tany sy iraisam-pirenena. Ny ampahany tsara amin'izany dia noho ny politikany fanavaozana tena tsara ho an'ireo terminal Android, araka ny aseho amin'ity tranga ity ny faritra BQ Aquaris U dia hahazo ny fanavaozana efa nandrasana hatramin'ny alàlan'ny OTA mankany Android Nougat na Android 7.1.1 manomboka izao!.
Ity fametrahana ny fanavaozana andrasana amin'ny Android Nougat 7.1.1 ity dia manomboka amin'ny andro anio ihany miaraka amin'ny BQ Aquaris U Plus, fametrahana izay antenaina hitranga amin'ity alina ity ihany amin'ny marainan'ny faritra Espaniola. Afaka andro vitsivitsy, ity fanavaozana ny OTA ity dia havoak'ireo modely manaraka amin'ny faritra BQ U:
1 Ity ny fametrahana ny fanavaozana ny OTA amin'ny Android 7.1.1 ho an'ny laharan'ny BQ U
2 Ahoana no ampiharako ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA amin'ny Android 7.1.1 Nougat?
2.1 Mifandraisa amin'ny tamba-jotra Wi-Fi miaraka amin'ny fantsona feno 100 × 100 ary mahareta
Ity ny fametrahana ny fanavaozana ny OTA amin'ny Android 7.1.1 ho an'ny laharan'ny BQ U
Androany ny famolavolana mandroso ny fanavaozana ny OTA amin'ny Android 7.1.1 ho an'ny BQ Aquaris U Plus, fametrahana izay araka ny nolazaiko fa hatao amin'ny fomba mihoampampana sy mandroso ho an'ireo maodelin'ny terminal BQ ireo, koa aza kivy ianao manomboka anio na amin'ny ankamaroan'ny maraina izao dia tokony hahazo ilay fampandrenesana antenaina momba ny fanavaozana ny rafitra vaovao azo alaina ianao.
Amin'ny andron'ny rahampitso rehefa mahazo ny doka nougat nandrasana efa ela ny BQ Aquaris U Lite amin'ny alàlan'ity fanavaozana ity amin'ny alàlan'ny OTA mankany Android 7.1.1, fanavaozana Android ofisialy izay izy ireo ihany no mahavita. Asehoy ireo terminal Google toa ny Google Pixel na ireo izay nampandeha ny fantsony tamin'ny alàlan'ny Rom LinageOS 14.1.
Amin'ny tranga ny maodely BQ Aquaris U dia manomboka ny ampitso rehefa mahazo ity fanavaozam-baovao ity ihany koa izy amin'ny alàlan'ny OTA mankany Android Nougat 7.1.1, mifanaraka tsara amin'ny famaritana ara-teknika sy fitaovana an'ny terminal Android-zareo.
Ahoana no ampiharako ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA amin'ny Android 7.1.1 Nougat?
Raha mampihatra an'ity fanavaozana vaovao ity amin'ny alàlan'ny OTA amin'ny Android 7.1.1 dia tsy mila manao na inona na inona mihitsy ianao ka atsaharo ny fidirana amin'ny toe-javatra Android anao, momba ilay fitaovana ary jereo raha misy fanavaozana ny rafitra vaovao hatramin'ny vantany vao miseho ny OTA misy ny maodelin'ny terminal anao dia hahazo fampandrenesana mandeha ho azy ianao manambara anao ity kinova Android vaovao ity misy.
Mila manahy fotsiny ianao amin'ny fananana toerana fitehirizana ampy, mihoatra ny latsaka mila hamainao na manana fitadidiana fitahirizana eo amin'ny 4 Gb amin'ny habaka kapila azo ampiasaina.
Mifandraisa amin'ny tamba-jotra Wi-Fi miaraka amin'ny fantsona feno 100 × 100 ary mahareta
Mariho tsara fa ny fisintomana ny fanavaozana ny OTA amin'ny Android 7.1.1 Nougat dia mety maharitra fotoana lava noho ny lanjan'ireo rakitra ilaina amin'ny fanavaozana ny rafitra, noho izany Manoro hevitra anao izahay mba tsindrio ny fampandrenesana fanavaozana ny OTA rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ianao ary aleo kokoa rehefa feno ny terminal anao. Izany no antony anoloranay hevitra ny hanavao amin'ny alina rehefa ampifandraisinay matetika ny terminal anay amin'ny charger tany am-boalohany mba hikarakarana azy.
Toy izany koa, nandritra ny fanatanterahana ny fanavaozana ny OTA ho an'ny Android 7.1.1 Nougat, izany hoe, rehefa nosintonina ny OTA ary nanomboka ny fizotry ny fanavaozana ity kinova Android vaovao sy farany ity, ny terminal anao dia hanomboka amin'ny maody fanompoana na maody Download mba hanatanterahana ilay fanavaozana ofisialy voalaza etsy ambony, mandritra ireo minitra ireo, vitsivitsy 30 minitra eo ho eoTsy ho afaka hampiasa ny terminal anao ianao ary hamerina azy ho azy indroa farafahakeliny, ary amin'ny faran'ny zava-drehetra, dia hasehony anao ny sary famantarana BQ sy ny efijery izay misy ny fanavaozana ofisialy ny Android 7.1.1 feno tanteraka .XNUMX.
Ny dingana farany dia ny manatsara ny rindranasa napetraka ao amin'ny BQ Aquaris U. Ity farany koa dia afaka maharitra elaela miankina amin'ny isan'ny rindranasa napetrakao ao amin'ny BQ-nao..
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Bq » Ny BQ dia manavao ny laharany U mankany Android 7.1.1. Lazainay aminao ny pitsopitsony rehetra sy ny fomba hirosoana
ZTE dia nanaiky ny "lesoka nataonay" tamin'ny fanomezana finday an'i Iran sy Korea avaratra ho fanitsakitsahana ny fandrarana amerikana